March 2016 – Gentleman Magazine
ပိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေရရှိဖို့ ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုရင်
ပိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေရရှိဖို့ ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုရင် အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ကို အပြည့်အ၀ကျေနပ်မှုရှိပါသလား။ တကယ်လို့ ရလဒ်ကို အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ဖို့ လုပ်မယ်ထင်ပါသလဲ။ ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေ ရရှိဖို့အတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကို အရင်ဆုံးပြောင်းလဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရရှိဖို့အတွက် အောက်ပါမေးခွန်း (၉)ခုကိုဖြေကြည့်ပါ။ ပြီးရင် အဖြေကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲချင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို
လုပ်ငန်းတည်ထောင်ရာမှာ လက်မတွဲသင့်တဲ့ လူ(၁၀)မျိုး လုပျငနျးတညျထောငျရာမှာ လကျမတှဲသငျ့တဲ့ လူ(၁၀)မြိုး အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်သူတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှာလဲဆိုတာကို အသေအချာစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ၀င်ရောက်လာသူတွေက သင့်ဘ၀ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်သူတွေကို ရှောင်ပြီး ဘယ်သူတွေကို လက်တွဲမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရတာကတော့ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းလောက်လေ့လာလိုက်ရုံနဲ့
လက်မထပ်ခင် မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၁၅)ခု လကျမထပျခငျ မေးကွညျ့သငျ့တဲ့ မေးခှနျး(၁၅)ခု အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည်စုပ်ထိုးဆိုတာက ပြုလုပ်ပြီးရင် ပြန်ပြင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ သင့်ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ သင့်ရဲ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အတူကုန်ဆုံးဖို့၊ အရာရာအားလုံးကို ဝေမျှခံစားဖို့၊ ပေးဆပ်တတ်ဖို့
ဘယ်သူနဲ့မဆိုဆက်ဆံရေးချောမွေ့စေဖုို့ လူတွေနဲ့ အလွယ်တကူပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်စွမ်းဟာ ပင်ကိုယ်ဗီဇတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ လူအများစုက ယူဆလက်ခံထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်က နားလည်မှုလွဲမှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သင်ထိန်းချုပ်သင်ယူနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး သိမှတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည် (EQ)နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဘယ်သူနဲ့မဆို ချက်ချင်း အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကနဦးအမြင်မှာ
သင့် မျက်လုံးတွေကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဒဏ်မှ ကာကွယ်ဖို့ အကြံဉာဏ် လေးခု သငျ့ မကျြလုံးတှကေို လြှပျစဈပစ်စညျးဒဏျမှ ကာကှယျဖို့ အကွံဉာဏျ လေးခု လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်တုန်းက ကျွန်တော် အအေးမိပြီး အိပ်ရာထဲ ရက်တော်တော်ကြာ လဲနေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဖျားက ပြင်းလွန်စတော့ ကျွန်တော့်အမြင်အာရုံကိုပါ ထိခိုက်သွားခဲ့ပြီး လက်တကမ်းစာထက် ပိုနီးတဲ့
သင့်အတ္တက သင့်အောင်မြင်နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်နေပါသလား သငျ့အတ်တက သငျ့အောငျမွငျနိုငျစှမျးကို ကနျ့သတျနပေါသလား အောင်မြင်ဖို့ ရည်မှန်းချက် ပြင်းပြတာဟာ အောင်မြင်ခြင်း ဖော်မြူလာတွေထဲမှာ အရေးအပါဆုံးပါ။ သင့်ရဲ့ အကြီးဆုံးပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ တစ်ခုထဲသော နည်းလမ်းကတော့ သင့်မှာရှိတဲ့ စိတ်ခွန်အား လူခွန်အား အားလုံးကို သုံးပြီး ကြိုးစားဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကို အဲဒိပန်းတိုင်ပေါ်
အိမ်ထောင်ရေးသုခကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် အိမျထောငျရေးသုခကို ထိခိုကျစနေိုငျသညျ့ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ချစ်တင်းနှောမှုက သင့်ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးအကြား ခံစားမှုတွေကို လွတ်လပ်စွာစီးမျောစေတဲ့ အခိုက်အတန့်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအရေးပါတဲ့ ချစ်တင်းနှောမှုအပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်က အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုရော သိပါသလား။ ကိုယ်အလေးချိန် များလွန်းပြီး အ၀လွန်နေတာက သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးသာယာမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဖွားဖက်တော်အရွယ်စား…..တကယ်အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လား ? တကယျအလုပျဖွဈရဲ့လား ? သင့်ရဲ့ဖွားဖက်တော်အရွယ်အစားကြီးမားဖွံ့ဖြိုးလာစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာကြည့်ဖူးပါသလား ? ဒီကိစ္စကလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဖွားဖက်တော်ကြီးမားဖွံ့ဖြိုးလာဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သောက်ဆေး၊လိမ်းဆေးတွေနဲ့ ပန့်တွေ၊ ကိရိယာတွေအကြောင်း တင်ထားတဲ့ပို့စ်ပေါင်း ၄ သန်းကျော်လောက်အထိ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေက တကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်သလားဆိုတော့ အဖြေက
(၁၀)မိနစ်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းစင်သွားဖို့ နည်းလမး (၁၀)ခု နေ့စဉ်ဘ၀ကို ရှင်သန်လှုပ်ရှားကြာရာမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတော့ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကသာ ကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို လမ်းလွဲသွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် စိုးရိမ်သောကတွေ၊ ဖိစီးမှုတွေကို အလွယ်တကူရပ်တန့်ပစ်လိုက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၁၀)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ တရားထိုင်ပါ။
နှုတ်ခမ်းဖျားပေါ်က အကြင်နာအနမ်း လူသားတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးချစ်ခင်စုံမက်ကြတဲ့အခါမှာ အကြင်နာအနမ်းတွေ ချွေလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ဘာကြောင့် နမ်းကြတာပါလဲ။ အနမ်းတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုက ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။ လူတွေ အနမ်းပေးကြသည့် အကြောင်းရင်း လူတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကြတာဟာ ဘ၀လက်တွဲဖော်ကို ရှာဖွေရှာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။